Ingqekembe yeVeki - Syscoin (SYS) | Klever ezezimali
Ingqekembe yeVeki – iSyscoin (SYS)
Isekwe kwi-2014, i-Syscoin (SYS) iye yavela ngokuqhubekayo ukuze ihambelane neemfuno zamaziko kunye namashishini akude ngaphaya komthamo wento enikezelwa ngamanye ama-blockchains amakhulu kwi-crypto space.
I-Bitcoin ayisiyoyokuqala kuphela, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo eyona blockchain ikhuselekileyo ekhoyo inikezwe ukwamkelwa kwayo ngobuninzi kunye nokuzinikela kubungqina bokusebenza kwemigodi, ejikeleza iglowubhu.
I-Syscoin ithatha ithuba lale modeli yokhuseleko ngokudityaniswa kwemigodi, enokuthi ikhuphe i-piggybacks kwimithombo esele inikezelwe ekukhuseleni inethiwekhi yeBitcoin. Ukuba awophukanga, kutheni uyilungisa? Olu lwalamano lwenza ukuba iSyscoin ingonwabeli kuphela i-hashrate yesibini ephezulu kuyo nayiphi na i-crypto, kodwa wenze njalo ngaphandle kokuchitha amandla ongezelelweyo.
I-Syscoin ihlala inyanisekile kwiinjongo zokuqala zikaSatoshi Nakamoto, ukubonelela ngeentengiselwano ezingabizi, ezikhuselekileyo ngendlela ephantsi. Nangona kunjalo, umbono wayo ngoku ufikelela kwiindawo ezingasetyenziswanga kwizinto ezinokwenzeka kwi-Web 3.0, ngokufanelekileyo ukwakha iziseko eziya kufunwa ukuba amashishini angene kwi-blockchain en masse.
Le mida yeziseko ezingundoqo iya kuba yintelekelelo yekhowudi kuphela ebulela kwi-giant leap forward ibe nguvulindlela ngaphakathi kwe-Network-Enhanced-Virtual-Machine yabo okanye i-NEVM. Yenzelwe ukuququzelela izivumelwano ezihlakaniphile ezifana ne-Ethereum, i-NEVM ye-Syscoin iya kwenza oko nge-Bitcoin yobungqina bomsebenzi wokukhusela imodeli yokhuseleko, ukudibanisa ngokufanelekileyo iimpawu ezintle zomntu ngamnye. Le ndlela yokuziphendukela kwemvelo nayo yakhiwa ngolawulo engqondweni.
Umaleko wesiseko se-Syscoin blockchain uya kuhlala udecentralized, kodwa abo bakhetha ukwakha phezu kwayo banenkululeko yokumisela ulawulo lolawulo, ngaloo ndlela benikezela nge-centralization kwabo bayidingayo kunye nenkululeko yokungabi nakwabo bangayifuniyo.
Nangona inguqulo yokuqala ye-NEVM iya kunika i-Bitcoin-secured izivumelwano ze-smart ngesantya esithelekisekayo kwinethiwekhi ye-Ethereum, isiseko siyakhiwa ukuze ekugqibeleni sivumele isantya esifikelela kwi-4 yezigidi zentengiselwano ngomzuzwana.
Konke oku kunokubonakala kukuhle, kwaye kunjalo ngokwenene. Nangona kunjalo, iziseko azizange zilityalwe. Nakwihlabathi jikelele, ukukhonza izigidi zentengiselwano ngomzuzwana, akukho nanye kuzo eya kudlula iqhezu leesenti yokwenziwa.
Ugcino olunjalo alulunganga kuphela kumaqumrhu, lutshintsha ubomi bamashishini amancinci asebenza kwimida ephantsi anokonga kwiimali zokulungisa amakhadi okuthenga ngetyala, okanye imirhumo enokuthi isetyenziswe ngcono ezandleni zabamkeli babo kwilizwe elikude. makayeke umrhwebi we-NFT we-social media-savvy.
I-Syscoin yenzelwe ukusuka kwinqanaba elisezantsi ukuze kugcinwe imali yokuthengiselana ephantsi kwaye ivumele abasebenzisi ukuba bathathe inxaxheba kwi-ecosystem ngaphandle kweengxaki zemali.
Ukuphinda, i-Syscoin ibonelela ngokudityaniswa phakathi kweyona nto ingcono yokhuseleko lweBitcoin kunye neminqweno yeshishini le-Ethereum, zonke ngexabiso eliphantsi kakhulu kunye nezantya eziphezulu. I-blockchain yabo kunye ne-NEVM yonyulwe ngamaqabane amaninzi ukuba aphuhlise iimveliso kunye neenkonzo zabo ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo kunye neemfuno kule meko ekhulayo, kwaye kumnqweno wethu wokuqhubeka nenkonzo yabathengi bethu kwixesha elizayo akuthandabuzeki ukuba kutheni. Klever ukhethe i-Syscoin Platform ukuze wenze okufanayo.
Intsebenziswano kunye Klever
Ukuyomeleza ngakumbi ngo-Epreli ka-2021, iSyscoin ibambisene nayo Klever, isipaji se-cryptocurrency esineziinkozo ezininzi ukuze ibe sisipaji esiphathwayo esisisiseko se-ecosystem yayo.
Phantsi kolu buhlakani, Klever ibe sesona sipaji siphambili se-SYS kunye ne-Syscoin Platform Tokens (SPTs) emva kokuba i-LUX mainnet isungulwe.
Klever I-ecosystem iya kungena kwizinto ezininzi ze-Syscoin ezibandakanya i-Z-DAG, i-AuxFees, kunye ne-Notary, kanti KleverAbasebenzisi bayakufumana ukufikelela kwixabiso kunye nezakhono ze Syscoin.
I-SYS ijonge ukwakha iibhulorho phakathi kwe-blockchains, amazwekazi kunye nemimandla, kwaye yenza ukuba wonke umntu kwihlabathi jikelele akwazi ukuzigcina ebhankini ngokusebenzisa Klever yiprojekti.
Ngaphandle kwe Klever, I-Syscoin inentsebenziswano esemthethweni kunye ne-Blockchain Foundry, i-Binance, i-TrustToken, i-Komodo, i-Decentralized Identity Foundation (DIF), i-Microsoft Azure, i-International Token Standardization Association (ITSA) kunye nokunye.
NgoJanuwari 2020, iSyscoin yavula iprotocol entsha yebhulorho kunye ne-Ethereum blockchains. Eyokuqala yohlobo lweprotocol isebenzisa ubungqina be-cryptographic phakathi kwe-blockchains ukwenza ibhulorho ethembekileyo yokusebenzisana kophawu.
Emva koko, iiprojekthi ze-Ethereum ezikhoyo zingasebenzisa i-Syscoin ngokukhawuleza, ukuthengiselana ngeendleko eziphantsi ukunceda iiprojekthi zikhule ngaphaya kwento inethiwekhi ye-Ethereum ekwazi ngayo ngoku. I-Syscoin kunye ne-Syscoin Platform Tokens nazo ziya kukwazi ukusebenzisa ibhulorho, okwenza iiprojekthi ze-Syscoin zisebenzise i-Ethereum's smart contracting capabilities kunye ne-wallet ecosystem.
I-Syscoin isebenzisa inkqubo yokudibanisa imigodi. Ngale nto, i-SYS inika ithuba lokufumana iingqekembe zemali ezongezelelweyo ngelixa kusembiwa i-blockchain engaphezulu kwesinye nge-algorithm efanayo yezemigodi ngaxeshanye. Oko kuthetha ukuba abasebenzi basezimayini beBitcoin banokuphinda basebenzise amandla abawasebenzisela imigodi yeBitcoin kwaye bawasebenzise kwiSyscoin kwaye banokufumana iSyscoin.
Ngenxa yoku, amanani amakhulu abasebenzi basezimayini be-BTC bazinikele kwi-SYS. Njengoko abasebenzi basezimayini khange banikezele amandla e-hashing nje kwi-SYS, kwaye babenokwabelana ngemigodi ebebesele beyenza kunye ne-BTC.
I-hashrate ye-Syscoin okwangoku ijikeleze i-3333.137 PH / s, emalunga nekota enye ye-Bitcoin's hashrate. Inzuzo enkulu yokudibanisa imigodi kukuba ivumela i-cryptocurrencies ene-hash ephantsi ukuba yonyuse ngokumangalisayo umthamo wabo we-hashing womnatha ngokufaka i-bootstrapping kwiimali ezigrunjwe ngokubanzi.
I-Syscoin yongeze into yokukhutshwa komqondiso kwiqonga layo elivumela abasebenzisi ukuba benze iinkqubo zokunyaniseka ezisekelwe kwi-token, iinkqubo zomvuzo, okanye baqhube iminikelo yabo yemali yokuqala (ICOs) kwi-Syscoin blockchain.
Iimpawu ezenziwe kwi-Syscoin blockchain zinombala okanye zisayinwe ngedatha eyongezelelweyo ekhethekileyo. Oku kuvumela abasebenzisi be-Syscoin ukuba badibanise i-SYS ngokuthe ngqo kunye neshishini labo lokuthengisa, okanye basebenzise iithokheni ze-SYS njenge-avatar kwiindawo ezibonakalayo.
Udluliselo lwe-asethi ngoko nangoko
I-Syscoin nayo inomsebenzi wokudluliselwa kwe-asethi ngokukhawuleza, eneziganeko ezithile ezinamandla zokusetyenziswa kwehlabathi ezinokuthi ziphazamise kakhulu. Ukudluliselwa kwe-asethi ngokukhawuleza kunokuvumela abasebenzisi beqonga lemarike yokuxela kwangaphambili ukuba bangene kwaye baphume kwiikhasino ze-intanethi ngaphandle kokulinda ixesha elide lokuqinisekisa okanye ukudluliselwa kwebhanki ye-fiat yendabuko, okanye ivumele abasebenzisi ukuba basebenzise i-SYS ekuthengeni kwangoko umdlalo okufana neebhokisi zokuphanga okanye amandla aphezulu.
Uphuhliso oluqinileyo lwemveliso ye-Syscoin lukwazile ukwenza i-cryptocurrency eyomeleleyo kwaye ebanzi ngokwemigaqo yezicelo ezinokuthi zibekho.
Ngendlela efanayo, Klever ibisoloko iphambili inikezela ngoluhlu olubanzi lweenkonzo, enye iyisipaji se-crypto esikhuseleke kakhulu, esixhasa iibhloko ezinkulu zehlabathi.
Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-3, Klever's amaqonga asakhulayo Klever Blockchain, Klever Shintsha, yaye Klever I-Hardware Wallet imiselwe ukuphazamisa icandelo kwiinyanga ezizayo kunye neminyaka.
Akukho kalo 5 Iivoti: 1